ओली र विद्या घाँसभित्र लुकेका हरिया सर्पहरु हुन् – भरत दाहाल – Sapana Sanjal
May 23, 2021 264
Sapana Sanjal : विदेशी दलालहरु कति अविश्वनिय हुन्छन् भन्ने यथार्थताको राम्रो उदाहरण केपी ओली र विद्या भण्डारी बनेका छन्। २ बर्ष अगाडी आफैले मजाक उडाएर अस्विकार गरेको नागरिकता षडयन्त्रलाई अध्यादेशबाट पारित गरेका ओलीको अध्यादेश विद्या भण्डारीबाट प्रमाणिकरण गरिएको छ। कुर्सीका लागि निचहरु कतिसम्म गिर्न सक्छन् भन्ने कुरा बुझ्न यीनीहरुको हर्कत हेरे पुग्छ।
Prev‘छाती बचाउनु नै कोरोना बाट बाँच्नु हो’ लक्षणहरु र बच्ने उपायहरु -कृपया एक पटक अवश्य पढ्नुहोला
Nextएकै घरका नौ जना बान्ता भै बिरामी हुन थालेपछि अस्पताल पुर्याएर बिरामीलाई सोधपुछ गर्दा ….
माया गर्ने मान्छे संग टाढा हुँदा कसरि प्रेमलाई जोगाइ राख्ने ? (भिडियो सहित्)